Ma ii sheegi kartaa sida loo helo EDU backlinks?
Waxaan ku jirey warshadda Mashruuca Raadinta Shirkadda muddo shan sano ah. Anigu waxaan fahamsanahay muhiimadda fahamka fiican sida dib loogu soo celiyo EDU. Taasina waa sababta doodan aan u socdo si aan kuu tuso istaraatijiyad lagu kalsoonaan karo si aad u siiso horumar aad u weyn xagga boggaaga ama blogga. Istaraatiijiyadani waxay ku salaynaysaa inta badan deeqda waxbarasho, xaqiiqdu waxay u socotaa in qof walbaa helo isku xirka waxbarashada ee saxda ah adigoon bixin lacagta dayn, ugu yaraan. Sidaa darteed, hoosta ayaan ku tusi doonaa sida loo helo EDU backlinks oo leh hagid talaabo tallaabo ah oo dhowaan tijaabiyey gudaha gudaha si aan u dhisno qiyaas ahaan 15 xirmooyinka bogagga waxbarashadda illaa laba ama saddex bilood. Haa, Waxa ay ahayd shaqo waqti dheer qaadatay, laakiin marwalba way iska bixinaysaa si hubaal ah. Tilmaame 1: Doorashada Xaqiiqda Saxda ah
Ka hor intaanaan billaabin, aynu wajahno - Doorashada dadka udubdhexaadka u leh iyo niche munaasab ah waa mid muhiim u ah kaliya ma ahan dhabarka dabiiciga ah, laakiin fahamka saxda ah ee ku saabsan sida loo helo EDU backlinks iyo bilaabi guuritaanka jidka saxda ah laga bilaabo bilowga. Waxaan u jeedaa xitaa haddii ay jirto xaalad macquul ah ee dhismaha isku xirka waxbarashada waxaad weli ubaahantahay inaad ogtahay dhagaystayaashaada bartilmaameedsaneysa, oo ahmiyad weyn u leh mawduucaaga mawduucaaga ama blogka. Ku dhigista Ingiriisi cad, oo dhan waxaad ubaahan tahay inaad bilowdo aqoonsi ardayda daawadayaasha ah. In kastoo aad doonayso inaad ku kasbato dib-u-celin waxbarasho oo qiimo leh, hubi inay aad u xiiseynayaan barnaamijka deeq-lacageedkaaga mustaqbalka.
Tier 2: Abuuritaanka Deeq Waxbarasho
Marka xigta, waa inaad ka shaqeysaa boggaaga deeqaha waxbarasho. Inkasta oo ay tahay shaqo fudud oo lagu abuurayo nooca mawduucan, halkan waxaa ku yaal qodobbo dhowr ah oo lagaa rabo inaad bixiso taxadar gaar ah. Hubi inaad haysatid wax kasta oo meel ka mid ah kuwan soo socda:
Sharaxaad shirkadeed - samee oo gaaban oo weli dhamaystiran, sida "deeqda waxbarasho ee gudaha. "Markaa, ku dar gudaha gudaha gudaha boggaaga, iyo sidoo kale qaybaha kale ee muhiimka ah si ay u dhaafaan juice isku xira.
Xaq u yeelashada - waa inaad sameysaa wax kasta oo shakhsi ahaan loogu talagalay ardaydaada bartilmaameedka ugu badan. Hubi inaad ka fikirto in ay leeyihiin jadwal buuxa ama waqti jadwal ah, koorsooyin khaas ah oo ku lug leh mawduucaaga ugu muhiimsan, waddanka (magaalada, ama degaanka) ay u badan tahay inay ka yimaadaan, iwm.
Qiimaha qiimaha - dabcan, qaddarka deeqda waxbarasho waxay ku xiran tahay miisaaniyadaada dhismahaaga. Laakiin aniga ahaan, waxaan kugula talineynaa inay kudhigaan qiyaastii kun doolar. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inay sidoo kale ku fashilmaan soo jiidashada hay'adaha tacliinta ee sumcad leh iyo cirbadahooda.
Faahfaahinta arjiga - dhamaanba waxaad u baahan tahay halkan waa qaabka cad oo la fahmi karo. Waxay u socotaa foomka codsiga ee ugu weyn ee loogu talagalay in loo isticmaalo musharrax kasta oo loo gudbiyo barnaamijka deeqda waxbarasho. Habkaas, hubi inaad sheegto waqtiga kama dambaysta ah iyo taariikhda abaalmarinta.
Tier 3: Fursadaha Bixinta
Aniga ahaan, waxaan filayaa fursadaha ugu muhiimsan ee dhismaha isku-xirka waxbarashada Waxaan isticmaalaa faafinta Excel. Habkaas, waxaan awoodi kari lahaa in la kormeero saxda ah dhammaan hawlahayga by bogga liiska deeqaha, liiska xiriirka, magaca, cinwaanka emailka, domains, hadalada, iwm. Taasi waxay fududeyneysaa wax badan!
Tier 4: Dhameystirka Dibadda
Ugu dambeyn, si aad u hesho faham buuxa sida loo helo dib u celinta EDU, waa inaad buuxisaa. Oo halkan waa inaad si firfircoon wax uga qabataa oo aad si adag u shaqeysaa si aad ugu dambeyn u hesho qofka xiriiriyaha saxda ah. Xasuusnow, dhammaan jaamacadaha iyo kulliyadaha ayaa qaar ka mid ah shaqaalaha mas'uul ka ah inay wax ka qabtaan. Sidaa daraadeed, waxa aad u baahan tahay waa inaad sameysid shaashad email adag oo aad u dirto kuwa doonaya jawaab celin wanaagsan. Marka la dhammeeyo, waxaad kaliya u diri doontaa faahfaahinta barnaamijka deeqda waxbarasho, ama buuxi foom gaar ah oo ay bixiso machadka waxbarashada Source .